धैर्य गर्दै ‘परमेश्वरको बाटो हेर्नुहोस्’ | अध्ययन
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अजरबैजानी (सिरिलिक) अफ्रिकान्स अरबी अर्जेन्टिनियन साङ्केतिक भाषा अल्बेनियन आइसल्याण्डिक आएमारा आम्हारिक आर्मेनियन आर्मेनियन (पश्‍चिमी) इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इलोको ईवी उङ्गाबेरे उज्बेक उन्डुबेली उम्बुन्डु उरुन्ड् एफिक एस्टोनियन ओरोमो कम्बोडियन काजाक किकुयु किन्यारवान्डा किरून्डी किर्गिज कोरियन कोलम्बियन साङ्केतिक भाषा क्याटालान क्रोएसियन क्वान्गाली क्वान्यामा क्वेचा (आयाकुचो) क्वेचा (बोलिभिया) क्षोसा गा गाउरानी ग्रीक ग्रीनल्यान्डीक चिचेवा चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चेक जर्जियन जर्मन जापानी जापानी साङ्केतिक भाषा जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या डच डाँग्मे डेनिश ताहिटी त्वी त्सोंगा थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा पंगासिनन् पंजाबी पोर्चुगिज पोलिश फिनिश फ्रान्सेली बिकोल बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भियतनामिज भेन्डा मले मालागासी माल्टिज मूर मेक्सिकन साङ्केतिक भाषा म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रारोतोंगान रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लाट्भियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ वायुनाइकी वारे-वारे वोलाइटा शोना सर्बियन सर्बियन (रोमन) सामोअन सिंहला सिलोजी सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसोथो (लेसोथो) स्पेनिश स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हाइटियन क्रिओल हिलिगेनोन
“परमेश्वरको बाटो म हेर्नेछु।”—मीका ७:७.
मीकाको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं?
हामी कस्ता घटनाहरू हुने समयको बाटो हेरिरहेका छौं?
यहोवाले धैर्य गर्नुभएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञ भएको देखाउने केही तरिका के हुन्‌?
१. हामी किन अधीर हुन सक्छौं?
सन्‌ १९१४ मा ख्रीष्ट स्वर्गमा राजा हुनुभएपछि सैतानको युगको आखिरी समय सुरु भयो। परिणामस्वरूप स्वर्गमा युद्ध भयो। येशूले सैतान र त्यसका दूतहरूलाई पृथ्वीमा फालिदिनुभयो। (प्रकाश १२:७-९ पढ्नुहोस्) सैतानलाई “आफ्नो समय थोरै मात्र बाँकी” छ भनेर थाह छ। (प्रका. १२:१२) तर यो ‘थोरै समय’ पनि कतिपयलाई सोचेभन्दा लामो लागेको छ। यहोवाले सैतानको युगको अन्त अहिलेसम्म नगर्नुभएकोमा कतै हामी पनि अधीर भएका छौं कि?
२. यस लेखमा कस्ता प्रश्नहरूको जवाफ पाउनेछौं?
२ अधीर हुनु खतरनाक हुन सक्छ। किन? किनकि अधीर हुँदा राम्ररी सोचविचार नगरी कदम चाल्न पुग्छौं। त्यसोभए धैर्य गर्दै ‘परमेश्वरको बाटो हेर्न’ हामीलाई केले मदत गर्न सक्छ? यस लेखले हामीलाई निम्न प्रश्नहरूको जवाफ दिएर मदत गर्छ। (१) धैर्य गर्ने सम्बन्धमा भविष्यवक्ता मीकाले बसालेको उदाहरणबाट हामी के सिक्न सक्छौं? (२) कस्ता घटनाहरूले अन्त नजिकै छ भन्ने जनाउ दिनेछ? (३) यहोवाले धैर्य गर्नुभएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञ भएको कसरी देखाउन सक्छौं?
३. मीकाको समयका इस्राएलीहरू कस्ता थिए?
३ मीका ७:२-६ पढ्नुहोस्। इस्राएलीहरू यहोवाप्रति वफादार हुन छोड्दै गएको र राजा आहाजको शासनकालसम्ममा त पूर्णतया अवफादार भएको भविष्यवक्ता मीकाले याद गरे। मीकाले यस्ता अवफादार इस्राएलीहरूको तुलना काँडासित गरे। अरूलाई हानि पुऱ्याउने भएकोले तिनीहरू काँडाजस्तै थिए। त्यतिखेरको परिस्थिति अत्यन्तै नराम्रो थियो। परिवारका सदस्यहरूबीच समेत दयामाया थिएन। यस्तो परिस्थिति सुधार्न आफूले केही पनि गर्न नसक्ने तथ्य मीकाले बुझेका थिए। त्यसैकारण तिनले यहोवालाई प्रार्थना गरेर आफ्नो व्यथा पोखे। त्यसपछि धैर्य गर्दै यहोवाको बाटो हेरे। यहोवाले ठीक समयमा कदम चाल्नुहुनेछ भनेर तिनी ढुक्क थिए।
४. हामीमध्ये कतिपयले कस्तो चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ?
४ मीकाजस्तै हामी पनि स्वार्थी मानिसहरूबीच बाँचिरहेका छौं। “कृतघ्न, विश्वासघाती, स्वाभाविक स्नेह नभएका” मानिस थुप्रै छन्‌। (२ तिमो. ३:२, ३) सहकर्मी, सहपाठी र छिमेकीहरू स्वार्थी हुँदा हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ। तर हामीमध्ये कतिपयले योभन्दा पनि ठूलो चुनौती सामना गर्नुपरिरहेको छ। आफ्ना अनुयायीहरूले परिवारको विरोध खप्नुपर्नेछ भनेर येशूले भन्नुभएको थियो। उहाँले भन्नुभएको कुरा र मीका ७:६ का शब्दहरू उस्तै-उस्तै छन्‌। येशूले यसो भन्नुभयो: “म छोरालाई बुबाको विरुद्ध, छोरीलाई आमाको विरुद्ध अनि बुहारीलाई सासूको विरुद्ध उठाएर फूट गराउन आएको हुँ। वास्तवमा मानिसको शत्रु उसको आफ्नै घरभित्रका मानिसहरू हुनेछन्‌।” (मत्ती १०:३५, ३६) परिवारमा यहोवाको सेवा नगर्ने सदस्यले हाम्रो गिल्ला र विरोध गर्दा सहन निकै गाह्रो हुन्छ। यस्तै चुनौतीको सामना गरिरहेका छौं भने हार नमानौं। बरु यहोवाप्रति वफादार भइरहौं र यहोवाले ठीक समयमा परिस्थिति सुधार्नुहुनेछ भनेर उहाँको बाटो हेरौं। प्रार्थना गरेर उहाँसित मदत मागिरह्यौं भने उहाँले हामीलाई वफादार रहन चाहिने बल अनि बुद्धि दिनुहुनेछ।
५, ६. यहोवाले मीकालाई के इनाम दिनुभयो? तर मीकाले के भने देख्न पाएनन्‌?
५ धैर्य गरेकोले यहोवाले मीकालाई इनाम दिनुभयो। मीकाले दुष्ट राजा आहाजको मृत्यु भएको र उनको शासन अन्त भएको देखे। आहाजका छोरा हिजकियाह राजा भएको र हिजकियाहले इस्राएलीहरूलाई फेरि यहोवाको उपासना गर्न मदत गरेको पनि तिनले देखे। सामरियाको सम्बन्धमा आफूले लेखेको भविष्यवाणी पूरा भएको पनि मीकाले देखे। अश्शूरीहरूले इस्राएलको उत्तरी राज्यलाई कब्जा गर्दा उक्त भविष्यवाणी पूरा भयो।—मीका १:६.
६ तर यहोवाले तिनलाई लेख्न लगाउनुभएका सम्पूर्ण भविष्यवाणी पूरा भएको भने मीकाले देख्न पाएनन्‌। जस्तै, तिनले पूरा भएको देख्न नपाएको एउटा भविष्यवाणी यो थियो: “पछिल्ला दिनमा परमप्रभुको भवनको डाँडाचाहिं पहाडहरूमा सर्वोच्च बनाइनेछ, र त्यो सबै पहाडहरूभन्दा उच्च पारिनेछ। औ अन्य जातिहरू त्यसमा ओइरिएर आउनेछन्‌। धेरै जातिहरू आएर भन्नेछन्‌, ‘आओ, हामीहरू परमप्रभुको पहाड, . . . परमेश्वरको भवनमा जाऔं।’” (मीका ४:१, २) वरपरका मानिसहरू जस्तोसुकै होऊन्‌, मीका भने मृत्युसम्मै यहोवाप्रति वफादार रहन दृढ थिए। तिनले लेखे: “सबै जातिका मानिसहरूचाहिं ता आफ्नो-आफ्नो देवताको नाउँमा हिंड्छन्‌, तर हामीचाहिं सदासर्वदै परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँमा हिंड्नेछौं।” (मीका ४:५) यहोवाले आफ्ना सम्पूर्ण प्रतिज्ञा पूरा गर्नुहुनेछ भनेर मीका ढुक्क थिए। त्यसैकारण तिनले गाह्रो अवस्थामा पनि धैर्य गर्दै यहोवाको बाटो हेर्न सके। यी वफादार भविष्यवक्ताले यहोवामा भरोसा राखे।
७, ८. (क) यहोवामा भरोसा राख्ने कस्तो कारण हामीसित छ? (ख) के गऱ्यौं भने समय बितेको पत्तै पाउनेछैनौं?
७ के हामी पनि मीकाजस्तै यहोवामा भरोसा राख्छौं? राख्नुपर्ने जायज कारण छ। हामीले मीकाको भविष्यवाणी पूरा भएको देखेका छौं। यी “पछिल्ला दिनमा” विभिन्न जाति, भाषा अनि कुलका लाखौं मानिस ‘यहोवाको भवनमा’ ओइरिएका छन्‌। आपसमा युद्ध गर्ने राष्ट्रबाट आएको भए तापनि यहोवाका उपासकहरूले “आफ्नो तरवार पिटेर हलोको फाली” बनाएका छन्‌ र ‘लडाइँ गर्न सिक्न’ इन्कार गरेका छन्‌। (मीका ४:३) यहोवाको शान्तिप्रिय मानिसहरूबीच हुन पाउनु वास्तवमा ठूलो सम्मान हो।
८ हामी यहोवाले चाँडै यस दुष्ट युगको अन्त गरेको चाहन्छौं। तर धैर्य गर्दै यहोवाको बाटो हेर्ने हो भने यहोवाले जसरी सोच्नुहुन्छ, त्यसरी नै सोच्नुपर्छ। उहाँले “आफूले नियुक्त गरेको एक जना मानिस” येशू ख्रीष्टमार्फत मानिसहरूको न्याय गर्न एक दिन तोक्नुभएको छ। (प्रेषि. १७:३१) तर त्यो दिन आउनुअघि यहोवाले सबै मानिसलाई “सत्यको सही ज्ञान” लिने, सिकेको कुरा लागू गर्ने र उद्धार पाउने मौका दिंदै हुनुहुन्छ। मानिसहरूको जीवन खतरामा छ। (१ तिमोथी २:३, ४ पढ्नुहोस्) यस युगको अन्त अचानक हुनेछ। तर यहोवालाई चिन्न मानिसहरूलाई मदत गर्ने काममा व्यस्त छौं भने बाँकी रहेको समय बितेको पत्तै पाउनेछैनौं। अनि अन्त नआउन्जेल प्रचारमा व्यस्त रहेकोले अन्त आउँदा हामी रमाउन सक्नेछौं।
कस्ता घटनाहरूले अन्त नजिकै छ भन्ने जनाउ दिनेछ?
९-११. पहिलो थिस्सलोनिकी ५:३ को भविष्यवाणी पूरा भइसक्यो? व्याख्या गर्नुहोस्।
९ पहिलो थिस्सलोनिकी ५:१-३ पढ्नुहोस्। निकट भविष्यमा “शान्ति र सुरक्षा”-को घोषणा हुनेछ! यस्तो घोषणाको बहकाउमा पर्न चाहँदैनौं भने “जागा बसौं अनि सचेत रहौं।” (१ थिस्स. ५:६) यस्तो महत्त्वपूर्ण घोषणा हुनुअघि कस्ता घटनाहरू हुनेछन्‌, आउनुहोस् छलफल गरौं।
१० दुवै विश्वयुद्धपछि राष्ट्रहरू शान्ति ल्याउन जोडतोडले लागे। प्रथम विश्वयुद्धपछि (१९१४-१९१८) शान्ति ल्याउन राष्ट्र सङ्घको स्थापना गरियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि (१९३९-१९४५) संयुक्त राष्ट्र सङ्घले शान्ति ल्याउनेछ भनेर मानिसहरूले आशा गरे। सरकार तथा धार्मिक नेताहरूले पहिले राष्ट्र सङ्घमा भरोसा गरेका थिए र अहिले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा भरोसा गरिरहेका छन्‌। उदाहरणको लागि, संयुक्त राष्ट्र सङ्घले १९८६ लाई ‘अन्तरराष्ट्रिय शान्ति वर्ष’ घोषणा गऱ्यो। त्यो वर्ष विभिन्न देशका राजनैतिक तथा धार्मिक नेताहरू क्याथोलिक धर्मका प्रमुखसित इटालीको आसिसिमा भेला भए र शान्ति आओस् भनेर प्रार्थना गरे।
११ तर त्यो घोषणा र त्यस्तै अन्य घोषणाले “शान्ति र सुरक्षा”-सम्बन्धी १ थिस्सलोनिकी ५:३ मा गरिएको भविष्यवाणी पूरा गरेन। किन? किनकि “एक्कासि विनाश” अहिलेसम्म भइसकेको छैन।
१२. “शान्ति र सुरक्षा”-सम्बन्धी घोषणाबारे हामीलाई के थाह छ?
१२ “शान्ति र सुरक्षा”-सम्बन्धी यो महत्त्वपूर्ण घोषणा भविष्यमा कसले गर्नेछ? यसमा चर्च तथा अन्य धर्मका गुरुहरूको भूमिका कस्तो रहनेछ? अनि विभिन्न मुलुकका सरकारको भूमिका कस्तो हुनेछ? बाइबलले यसबारे केही पनि बताएको छैन। तर यो घोषणा जसरी गरिए तापनि वा जतिसुकै भरपर्दो सुनिए तापनि त्यो घोषणामै सीमित रहनेछ भन्ने तथ्यचाहिं हामीलाई थाह छ। किनकि यो संसार अझै पनि सैतानकै अधीनमा हुनेछ। फर्सी कुहिएझैं भित्रैसम्म कुहिसकेको यस संसारलाई केही गर्न सकिनेछैन। त्यसैकारण सैतानले फैलाएको झूट पत्याएर राजनीतिमा सामेल भयौं भने परिणाम अत्यन्तै दुःखदायी हुनेछ।
१३. स्वर्गदूतहरूले विनाशको बतासलाई किन थामिराखेका छन्‌?
१३ प्रकाश ७:१-४ पढ्नुहोस्। पहिलो थिस्सलोनिकी ५:३ पूरा हुने समयलाई हामीले पर्खंदै गर्दा शक्तिशाली स्वर्गदूतहरूले भने महासङ्कष्टको विनाशको बतासलाई बलियोसित थामिराखेका छन्‌। तिनीहरू कुन घटनालाई पर्खिरहेका छन्‌? एउटा महत्त्वपूर्ण घटना हो, “हाम्रो परमेश्वरका दासहरू” अर्थात्‌ अभिषिक्त जनहरूले पाउने अन्तिम छाप। * अभिषिक्त जनहरूले अन्तिम छाप पाएपछि ती स्वर्गदूतहरूले विनाशको बतासलाई छोडिदिनेछन्‌। त्यसपछि के हुनेछ?
१४. महान्‌ बेबिलोनको विनाश नजिकै छ भनेर कसरी थाह पाउँछौं?
१४ झूटो धर्मको विश्व साम्राज्य महान्‌ बेबिलोनले त्यसले पाउनै पर्ने दण्ड भोग्नेछ। त्यसलाई कसैले पनि मदत गर्न सक्नेछैन। त्यसको विनाश नजिकै छ भन्ने सङ्केत हामीले देखिसक्यौं। (प्रका. १६:१२; १७:१५-१८; १८:७, ८, २१) धर्म र धर्मगुरुहरूको आलोचना गरिएका समाचारहरूबाट त्यसको समर्थन घट्दै गएको प्रस्ट हुन्छ। तैपनि यी धर्मगुरुहरू आफू नाश हुँदैछौं भनेर पत्याउन तयार छैनन्‌। तिनीहरू सरासर गलत छन्‌। “शान्ति र सुरक्षा”-को घोषणापछि राजनीतिले झूटो धर्ममाथि अचानक आक्रमण गर्नेछ र त्यसलाई पूर्णतया नाश गर्नेछ। महान्‌ बेबिलोनको नामोनिसान रहनेछैन! यस्तो ऐतिहासिक घटना हेर्न धैर्य गर्दै यहोवाको बाटो हेर्नुपर्छ।—प्रका. १८:८, १०.
परमेश्वरले धैर्य गर्नुभएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञ भएको कसरी देखाउन सक्छौं?
१५. यहोवाले किन धैर्य गर्नुभएको छ?
१५ मानिसहरूले यहोवाको नामको अनादर गरेका छन्‌। तैपनि उहाँले न्याय गर्ने ठीक समय धैर्य गर्दै पर्खनुभएको छ। यहोवा नम्र हृदय भएका मानिसहरू नष्ट भएको चाहनुहुन्न। (२ पत्रु. ३:९, १०) हामी पनि चाहँदैनौं। यहोवाले धैर्य गर्नुभएकोमा उहाँप्रति कृतज्ञ भएको देखाउन सक्ने विभिन्न तरिका छन्‌।
१६, १७. (क) यहोवाको सेवा गर्न छोडेकाहरूलाई हामीले किन मदत गर्नुपर्छ? (ख) यहोवाको सेवा गर्न छोडेकाहरूले उहाँतर्फ फर्कन किन ढिलो गर्नुहुँदैन?
१६ निष्क्रिय भएकाहरूलाई मदत गर्नुहोस्। हराएको एउटा भेडा मात्र भेटिंदा पनि स्वर्गमा रमाहट हुन्छ भनेर येशूले बताउनुभयो। (मत्ती १८:१४; लूका १५:३-७) अहिले यहोवाको सेवा नगरे तापनि कुनै समय यहोवा र उहाँको नामलाई माया गरेकाहरूको उहाँ धेरै ख्याल गर्नुहुन्छ। हामीले उनीहरूलाई यहोवातर्फ फर्कन मदत गर्दा उहाँ रमाउनुहुन्छ र स्वर्गदूतहरू पनि सँगसँगै रमाउँछन्‌।
१७ तपाईंले अहिले यहोवाको सेवा गर्न छोड्नुभएको छ कि? मण्डलीमा कसैले तपाईंको चित्त दुखाएकोले सभा जान छोड्नुभएको होला। तर अहिले केही समय बितिसक्यो होला। त्यसैले आफैलाई सोध्नुहोस्: ‘के मेरो जीवन अझै राम्रो भएको छ? के म पहिलेभन्दा खुसी छु? मेरो चित्त दुखाउने यहोवा हुनुहुन्छ वा त्रुटिपूर्ण मानिस? यहोवाले मलाई कहिल्यै हानि पुऱ्याउनुभएको छ र?’ यहोवाले सधैं हाम्रो भलो हुने काम गर्नुभएको छ। अहिले हामीले आफ्नो समर्पणअनुसार जीवन बिताइरहेका छैनौं होला; तैपनि उहाँले हामीलाई असल थोक दिइरहनुभएको छ। (याकू. १:१६, १७) यहोवाको दिन चाँडै आउँदैछ। हामीलाई माया गर्ने बुबा यहोवातर्फ फर्कने र मण्डलीमा फेरि सङ्गति गर्न थाल्ने समय अहिल्यै हो। अन्तको दिनमा योभन्दा सुरक्षित ठाउँ अरू कुनै छैन।—व्यव. ३३:२७; हिब्रू १०:२४, २५.
निष्क्रिय भएकाहरूलाई यहोवातर्फ फर्कन मदत दिन उहाँका सेवकहरू सकेजति गर्छन्‌ (अनुच्छेद १६, १७ हेर्नुहोस्)
१८. नेतृत्व लिइरहेकाहरूलाई हामीले किन समर्थन गर्नुपर्छ?
१८ नेतृत्व लिइरहेकाहरूलाई वफादार भई समर्थन गर्नुहोस्। मायालु गोठालो हुनुभएकोले यहोवा हामीलाई डोऱ्याउनुहुन्छ, हाम्रो सुरक्षा गर्नुहुन्छ। उहाँले आफ्नो छोरालाई बगालको मुख्य गोठालो नियुक्त गर्नुभएको छ। (१ पत्रु. ५:४) एक लाखभन्दा धेरै मण्डलीका एल्डरहरू प्रत्येक भेडाको राम्ररी हेरचाह गर्छन्‌। (प्रेषि. २०:२८) नेतृत्व लिइरहेकाहरूलाई वफादार भई समर्थन गर्दा यहोवा र येशूले हाम्रो लागि जे-जति गर्नुभएको छ, त्यसप्रति धन्यवादी भएको देखाइरहेका हुनेछौं।
१९. हामी कसरी मोर्चा बाँध्न सक्छौं?
१९ भाइबहिनीसित घनिष्ठ हुनुहोस्। यसको अर्थ के हो? शत्रुले आक्रमण गर्दा तालिमप्राप्त सेनाले मोर्चा बाँध्छ। विपक्षी सेनासित लड्न तिनीहरू एकसाथ खडा हुन्छन्‌। मोर्चा बाँधेर बनाइएको घेरालाई सजिलै तोड्न सकिंदैन। अहिले सैतानले परमेश्वरका सेवकहरूलाई झन्‌झनै आक्रमण गरिरहेको छ। त्यसैकारण अहिले भाइबहिनीसित ठुस्कने, रिसाउने वा झगडा गर्ने समय होइन। बरु एकअर्कासित घनिष्ठ हुने, भाइबहिनीको दोषलाई बेवास्ता गर्ने र यहोवामाथि भरोसा गर्ने समय हो।
सैतान र त्यसका दुष्ट स्वर्गदूतहरूविरुद्ध मोर्चा बाँध्ने समय अहिल्यै हो (अनुच्छेद १९ हेर्नुहोस्)
२०. अहिले हामीले के गर्नुपर्छ?
२० आउनुहोस्, यहोवासितको सम्बन्ध बलियो बनाऔं र उहाँको बाटो हेरौं। “शान्ति र सुरक्षा”-को घोषणा हुने र अभिषिक्त जनहरूलाई अन्तिम छाप लगाइने समय धैर्य गर्दै पर्खौं। त्यसपछि चारवटा स्वर्गदूतले विनाशको बतासलाई छोडिदिनेछन्‌ र महान्‌ बेबिलोन नाश हुनेछ। यी ऐतिहासिक घटना हुने समयको बाटो हेर्दै बस्दा यहोवाको सङ्गठनमा नेतृत्व लिइरहेका भाइहरूले दिने निर्देशन पछ्याऔं। सैतान र त्यसका दुष्ट स्वर्गदूतहरूविरुद्ध मोर्चा बाँधौं। अहिले भजनरचयिताले दिएको यो सल्लाह पालन गर्ने समय हो: “हे परमप्रभुमा आशा राख्ने हो, बलियो होऊ, र तिमीहरूका हृदयमा साहस आओस्।”—भज. ३१:२४.
^ अनु. 13 कुनै ख्रीष्टियनलाई अभिषिक्त जनको रूपमा छानिंदा पहिलो छाप लगाइन्छ भने पूर्णतया वफादार साबित भइसकेपछि अन्तिम छाप लगाइन्छ।–जनवरी १, २००७ को प्रहरीधरहरा (अङ्ग्रेजी), पृष्ठ ३०-३१ हेर्नुहोस्।
Text डिजिटल प्रकाशन डाउनलोडका विकल्प प्रहरीधरहरा—अध्ययन संस्करण नोभेम्बर २०१३